अन्ततः राजेश हमालसंग झुकेरै सलोन बस्नेतले मागे माफी ! कारण निकै रोचक – Online Khabar 24
अन्ततः राजेश हमालसंग झुकेरै सलोन बस्नेतले मागे माफी ! कारण निकै रोचक
October 11, 2021 by admin admin
निर्देशक शोभित बस्नेतले फिल्म ‘डाँडाको बरपीपल’ को गीत रिलिज कार्यक्रममा अभिनेता राजेश हमाललाई दिइएको ‘महानायक’ पदवीमाथि प्रश्न उठाएपछि ठूलै विवा’द जन्मियो ।
यो वि’वाद यतिसम्म चर्कियो कि उनकै फिल्मलाई दर्शकले बहि’स्कार गर्नेसम्मको कुरा उठाए । यसबाट डराएर शोभितले ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा अबदेखि राजेश हमाललाई ‘महानायक’ मान्ने वाचा नै गरे ।’
‘महानायक’ विवा’द च’र्किएकै समयमा उनका छोरा तथा अभिनेता सलोन बस्नेतले पनि ‘महानायक’ को परिभाषा आफूलाई थाहा नभएको बताए । यो अभिव्यक्ति उनी आफैंमाथि भारी पर्‍यो । केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि गा’लीको वर्षा भएको छ । दर्शकहरुले अबदेखि उनका फिल्म नहेर्नेसम्म भनेका छन् । अन्ततः उनले पनि पिताले झैँ गरी दर्शकसँग मा’फी मागेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले ह’डबडाहटमा बोल्न नजानेर आफू बाट ठूलो ग’ल्ती भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘मेरो पिढीको सबैभन्दा भाग्यमानी कलाकार लाग्थ्यो । मलाई थाहा थिएन, दिन यस्तो आउला जब मैले उहाँहरूमा फरक छुट्याउनु पर्नेछ भनेर ।
मेरो अहम, मेरो गर्व, मेरो धर्म, मेरो क’र्म सबै जहाँ सिकेँ, त्यो मुहारलाई १, २ र ३ गरेर छुट्याउनु मेरो हैसिय तभन्दा धेरै माथिको कुरा लाग्यो । शब्द छनोट गल’त भयो मेरो तर मनबाट गल’त सोचेको छैन ।’
आफ्नो शब्दले असर पर्न पाएकोमा उनले सबैसँँग मा’फी मागेका छन् । आजसम्म सिनेमा बाहेक अरु सोच्न नसकेको र कहिल्यै सोच्दा पनि नसोच्ने उल्लेख गर्दै सलोनले आफूलाई गलत नबनाइदिन आग्रह गरेका छन् । उनले फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गर्दै गर्दा राजेश हमालसँग पनि मा’फी माग्दै ‘माफ गर्दिनुस् महानायक’ भनेर लेखेका थिए । तर, अहिले उनको स्टाटसमा यो लाइन छैन । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevदशैको बेलामा एकाएक घट्यो सुनको मूल्य ! प्रतितोला कति ?
nextनेपालमा यस्तो शक्तिशाली मन्दिर छ जहाँ पुग्दा गाडी रोकिन्छन , दर्शन गरी स्टार्ट गर्नुपर्छ जय सुपा देउराली सबैको रक्षा गर !